Iindlwane zamawa studio Etretat - I-Airbnb
Iindlwane zamawa studio Etretat
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uNathalie iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Iindlwane ezimbini ezincinane umtsalane ka 20m2 kuquka 1 lokulala 1 lokuhlambela kunye nekhitshi, ozimeleyo, 600m ukusuka elwandle kunye perrey wayo, 5mn ukusuka elunxwemeni entle ongcwele jouin yi flag eluhlaza 5km kuphela ukususela iiholide elinomtsalane ka Etretat ngokunjalo 20mn ukusuka echwebeni ... Ukujongana nehlathi kunye kufuphi kakhulu neelwandle, le ndawo ikumema ukuba uphumule ... igadi yangasese ekhoyo kunye ne-barbecue, itafile yepikiniki kunye nefenitshala yegadi.
Abathandi bendalo baya kuvuya
Indawo ezolileyo phakathi kolwandle nehlathi...
Nangona kunjalo, izinja zinokukhonkotha kancinci kodwa azidibanisi nestudiyo sakho.Bonke abakhenkethi bethu bayakuxabisa ukuzola nokuva iintaka zicula.
siyafumaneka ngexesha lokuhlala kwakho ngamaxesha athile emini.Inombolo yomnxeba uya kunikwa kunye nolwazi oluyimfuneko ngotyelelo, iindawo zokutyela njlnjl ... Asenzi isidlo sakusasa kodwa uya kuba nekhefi ekhitshini lakho. ibhotile yamanzi kunye neti .... nangona yonke into ngeempelaveki ungasiodola isidlo sakusasa egumbini lakho
siyafumaneka ngexesha lokuhlala kwakho ngamaxesha athile emini.Inombolo yomnxeba uya kunikwa kunye nolwazi oluyimfuneko ngotyelelo, iindawo zokutyela njlnjl ... Asenzi isidlo sakus…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Saint-Jouin-Bruneval